Chizvarwa chinotevera cheApple Watch chinozoziva mushandisi nekurova kwemoyo wake | Ndinobva mac
Chizvarwa chinotevera cheApple Watch chinozoziva mushandisi nekurova kwemoyo yavo
Musi waSeptember 7, Apple yakaratidza chizvarwa chechipiri cheApple Watch, makore maviri mushure mekuratidzwa kwayo kwepamutemo. Iwo mamodheru matsva ave kuwanikwa kuti atenge rinenge pasirese uye Runyerekupe rwakatotanga kutenderera pamusoro peiyo nyowani modhi, inova chizvarwa chechitatu cheApple Watch. United States Patent neTrademark Hofisi nhasi yaburitsa patent nyowani inoratidza kuti Apple Watch inogona kuziva muridzi wayo zvichibva pakurova kwemoyo wavo. Zita repatent rinoverengwa 'Chitupa sosi yakavakirwa pane plethysmography.
Iyi patent inotsanangura mashandisiro anoita pulse oximeter sarudza iyo biometric siginecha yemushandisi yemoyo mutinhimira. Iyi data inogona kushandiswa kuzivisa iye akapfeka uye kuvhura wachi nenzira imwecheteyo yekubata ID pane iyo iPhone. Iyi sisitimu inoshanda nenzira yakafanana kune aripo mamonitor, nekuratidzira mwenje paganda remushandisi uye huwandu hwechiedza chakapinza nekuratidzira kumashure kuchinhu.
Nenzira iyi kuyerwa kunogona kushandiswa kuona huwandu hweropa ruripo mumidziyo yeropa. Zvinoenderana neiri patent, iyo data yakaunganidzwa nevaviri photosensors inochengetwa kana kufananidzwa neruzivo rwambochengetedzwa. kunyatsoziva mushandisi.
Mune imwe patent inosanganisirwa neiyi, zvakare yakaburitswa neUnited States Patent uye Trademark Hofisi, ino sisitimu zvakare yaizofunga nezve inofamba maseru, accelerometer, uye gyroscope kuona mafambiro emushandisi. Zvimwe zviratidzo, semuenzaniso kusimudza chishandiso kumusoro, zvinokonzeresa maitiro echokwadi.
Zvine musoro kuti zvese izvi zvitsva zvidziviriro zveApple Watch zvakanaka chero bedzi zvisingatangi dzora ruzivo rwekuishandisa kana ichifanira kuzivikanwa pese patinosimudza ruoko kuti tione nguva kana kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chizvarwa chinotevera cheApple Watch chinozoziva mushandisi nekurova kwemoyo yavo
Chii chitsva muAdobe Premiere Elements 15 ye mac
Zvitsva zvitsva zvine chekuita neApple Watch zvakanyoreswa neApple